INTERNET EXPLORER ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို - WINDOWS ကို - 2019
Internet Explorer ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နဲ့ Windows ၏ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းအတွက်စံ Microsoft ကဘရောက်ဇာကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်နည်းလမ်းများကိုဖော်ပြရန် - သင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါက Internet explorer, အဖြေဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါလမ်းညွှန်၏ပထမအစိတ်အပိုင်းအတွက် (ရိုးရိုး 11 ကြိမ်မြောက်ဗားရှင်းဖယ်ရှားရေးအသုံးပြုပုံကြောင့်များသောအားဖြင့်ယခင်တစျခု,9သို့မဟုတ် 10 ကိုအစားထိုးတာဖြစ်ပါတယ်) Internet Explorer ကို 11 ဖယ်ရှားပစ်ရန်အဖြစ်လုံးဝ Windows7တွင် Internet Explorer ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။ အဲဒီနောကျ - အတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားကိုဖန်ဆင်းသော, Window 8.1 နဲ့ Windows 10 မှာ IE ကိုဖျက်ပစ်ရန်။
ငါသည်ငါ့အမြင်အတွက်က IE ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မဟုတ်ပိုကောင်းကြောင်းသတိပြုပါ။ browser ကိုကြိုက်မပါဘူးဆိုရင်, သငျသညျရိုးရှင်းစွာအသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်တောင်မှသူ့မျက်စိကနေတံဆိပ်များကိုဖယ်ရှားမပေးပါဘူးနိုင်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးကို Windows ကနေ Internet Explorer ကိုမဖယ်ရှားပြီးနောက် irreparable ဘာမျှမ (သင် IE ကို delete မတိုင်မီပင်အခြားဘရောက်ဇာကိုတင်ထားရန်သေချာစေပါ, အရေးအကြီးဆုံးကတော့) ဖြစ်ပျက်မထားဘူး။
Windows7မှာက Internet Explorer 11 ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
ဘယ်လိုလုံးဝကို Windows7မှာက Internet Explorer ဖယ်ရှားပစ်ရန်
Windows 8 နဲ့ Windows 10 ရက်နေ့တွင်က Internet Explorer ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
သင်တို့သည်ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များအတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, ကဖယ်ရှားပစ်ရန်အတွက် Windows7နှင့် IE ကို 11 နဲ့စတင်ဖွင့်ကြစို့:
(control panel ကိုအမျိုးအစားမဟုတ်ဘဲ "အမျိုးအစားများ" ထက် "Icons", ညာဘက်ထိပ်မှာအပြောင်းအလဲတွင်ထည့်သွင်းခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်) Control Panel ကိုသွားပြီး "အစီအစဉ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ" ကိုရွေးချယ်ပါ။
လက်ဝဲ Menu ထဲမှာ "View updates များကို install လုပ်ပြီးသား" ကိုနှိပ်ပါ။
ထည့်သွင်း updates များကိုစာရင်းမှာက Internet Explorer 11 နေရာချထား, mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့် "Remove" (သို့မဟုတ်သင်ရိုးရှင်းစွာထိပ်မှာတစ်ဦးပွိုင့်ကိုရှေးခယျြနိုငျသညျ) ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါရန်အင်တာနက် Explorer ကို update ကို 11, နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်၏ပြီးစီးအပေါ်သို့ဖယ်ရှားလိုသည်ဟုအတည်ပြုဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အနာဂတျမှာ 11 IE ကိုပြန် install လုပ်မဒါ reboot ပြီးနောက်မှာလည်းဒီ update ကိုဖုံးကွယ်ထားသင့်ပါတယ်။ (ဥပမာအနေနဲ့ကို item လက်ဝဲ Menu ထဲမှာရှိပါတယ်) ကို Windows Update ကိုများနှင့်ရရှိနိုင် updates များကိုရှာဖွေ - ဒီလိုလုပ်ဖို့, Panel ကိုထိန်းချုပ်သွားပါ။
ရှာဖွေရေး (တစ်ခါတစ်ရံအချိန်ကြာမြင့်စွာအချိန်ယူ) ထွက်ယူသွားတတ်၏ပြီးနောက်, ကို item "မလုပ်မဖြစ်အပ်ဒိတ်များ" နှင့် Internet Explorer 11 ကိုရှာဖွေပုံပေါ်သောစာရင်းထဲတွင်ပေါ် click လုပ်, လက်ျာ mouse ကို button ကို click ပြီး "ဝှက် update ကို" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ OK ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဤအမှုအလုံးစုံပွီးနောကျ, သင်ဆဲတဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ IE ကိုဖြစ်ပေမယ့်ဒသမပေမယ့်ယခင်ဗားရှင်းများထဲမှမည်မဟုတ်။ သင်ကဖယ်ရှားပစ်ရရန်လိုအပ်လျှင်, အပေါ်ကိုဖတ်ပါ။
အခုတော့ IE ကို၏ပြီးပြည့်စုံသောဖယ်ရှားရေးသည်။ သငျသညျ Windows7ကို Microsoft က browser ၏ 11 version ကို install လုပ်ထားရှိပါကသင်ပထမဦးဆုံးယခင်အပိုင်းအတွက်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာ (က reboot အပါအဝင်အပြည့်အဝခုနှစ်, ဒါမှမဟုတ် updates များကိုဖုံးကွယ်) နှင့်ထို့နောက်နောက်တဆင့်မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရပေမည်။ IE ကို9သို့မဟုတ် IE ကို 10 ရှိလျှင်သင်ချက်ချင်းစတင်နိုင်ပါသည်။
ထို့နောက် Control Panel ထဲကသွားပြီး "အစီအစဉ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ" ကိုရွေးချယ်ပါနှင့် - ကြည့်ရန်လက်ဝဲဘက်အပေါ် Menu ထဲမှာ updates များကို install လုပ်ပြီးသား။
Windows ကိုက Internet Explorer 9, သို့မဟုတ် 10 Find တစ်ခုကိုရွေးပြီးမောက် Right-နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ထိပ်မှာဒါမှမဟုတ် Context Menu က၌ 'Delete' 'ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဖယ်ရှားရေးပြီးနောက်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါကအနာဂတ်၌တည်သည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ၏ shutdown ချနဲ့ဆက်စပ်ပထမဦးဆုံးအပိုင်းကနေညွှန်ကြားချက်ပြန်လုပ်ပါ။
ထို့ကြောင့်ကွန်ပျူတာကနေ Internet Explorer ကို၏ပြီးပြည့်စုံသောဖယ်ရှားရေးအစောပိုင်းကမှနောက်ဆုံးပေါ်အပေါငျးတို့သ installed ဗားရှင်း၏တသမတ်တည်းဖယ်ရှားရေးဖြစ်ပါသည်, ဤများအတွက်ခြေလှမ်းများပြုပါအဘယ်သူမျှမကွဲပြားခြားနားပါသည်။
ဖယ်ထုတ်အင်တာနက်က Windows 8.1 ကိုအတွက် Explorer ကို (8), နဲ့ Windows 10
နှင့်အညီ, နောက်ဆုံးတော့ဘယ်လိုဤတွင် Windows 8 နဲ့ Windows 10. ပေါ်မှာ Internet Explorer ဖယ်ရှားပစ်ရန်, ဖြစ်ကောင်းပင်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
အဆိုပါ Control Panel ထဲက (ထို "Start ကို" ခလုတ်ကိုပေါ်တွင် right-click နှိပ်. ဒီလိုလုပ်ဖို့အမြန်ဆုံးလမ်း) သွားပါ။ Control Panel ထဲက "အစီအစဉ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ထိုအခါလက်ဝဲ Menu ထဲမှာ "Enable သို့မဟုတ် Disable လုပ်ထားသည် Windows အင်္ဂါရပ်များ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
က Internet Explorer 11 အစိတ်အပိုင်းများကိုအောက်ကိုဆင်းနှင့်က uncheck လုပ်ပါ။ သင့်အနေဖြင့်တစ်ဦးသတိပေးမြင်ရပါလိမ့်မည် "ကိုပိတ်ထားပါက Internet Explorer 11 ကွန်ပျူတာထဲမှာ install သည်အခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစီအစဉ်များကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။ " သငျသညျသဘောတူခဲ့လျှင် "Yes" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ (သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား browser ကိုရှိပါကတကယ်တော့, ကြောက်မက်ဘွယ်သောအဘယ်အရာကိုမျှဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးဖြစ်တော့ခုနှစ်တွင်, သင်သည် Microsoft website ကနေနောက်ပိုင်းမှာ IE ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်ရုံပါဝင်ပစ္စည်းများအတွက်ပြန်ဖွင့်) ။
ကွန်ပျူတာကနေ IE ကိုမဖယ်ရှားစတင်ပြီးတော့ reboot, အရာပြီးနောက်သင်ဤဘရောက်ဇာနဲ့ Windows 8 မှာကဖို့ဖြတ်လမ်းကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်, သို့မဟုတ် 10 ရန်သင့်ခွင့်ပြုချက်ပြီးနောက်။
သင်က Internet Explorer ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပျက်၏အမှု၌တည်၏။ တကယ်တော့ပေမယ့်ဘာမျှမ:
သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အခြားဘရောက်ဇာရှိမထားဘူးဆိုရင်သင်ကအင်တာနက်ပေါ်ရှိလိပ်စာတံဆိပ်များဖွင့်လှစ်ရန်ကြိုးစားသောအခါ, သငျသညျမှားယွင်းမှုတစ်ခု Explorer.exe ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
သူတို့က IE နဲ့ဆက်စပ်နေလျှင်, html files တွေကိုနှင့်အခြားဝဘ်ကို formats များအတွက်အသင်းအဖွဲ့ပျောက်ကွယ်သွား။
ကျနော်တို့အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင် အသုံးပြု. ကို Windows 8, အစိတ်အပိုင်းများ, ဥပမာ, Windows Store စတိုးဆိုင်နှင့်အုပ်ကြွပ်အကြောင်းပြောဆိုလျှင်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, operate ဆက်လက်နဲ့ Windows7မှာအဖြစ်ဝေးစီရင်ခြင်းကိုခံရနိုင်ပါတယ်အဖြစ်, အရာအားလုံးစနစ်တကျအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: Internet Explorer Chan! Season One (စက်တင်ဘာလ 2019).